/blog/ibu Loss/Ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke 10 kachasị mma nke Loss Powder
Ihe na 09 / 01 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na ibu Loss. O nwere 58 Comments.
Ngwá ọgwụ ahụ na-arụkwa ọrụ noradrenaline na "nri nri" nke ụbụrụ mmadụ, hypothalamus. Mmadụ hypothalamus na-achịkwa ike ike na usoro ahụ. Enwere ike ịkọwa ihe gbasara ụlọ ahịa ike na hypothalamus nke na-achịkwa nri na agụụ. Noradrenaline ejidere na ọrụ na hypothalamus nwere mmetụta mbelata na agụụ. Ụdị ọgwụ ndị ahụ gụnyere:
Njehie ahụ bụ nke kwesịrị ekwesị maka ọgwụ ọgwụ ahụ. Ka ọgwụ ọgwụ ahụ na-arịwanye elu, mmepụta ume na-abawanye ụba, ọnụ ọgụgụ a na-ebuli elu na-ebuli elu (a bukwara oke abụba ọkụ) iji zụlite ume ma kwụọ ụgwọ ọrụ ahụ. DNP bụ otu n'ime ụlọ ọrụ mara mma nke a maara maka ịmepụta phosphorylation oxidative. Igwe ụbụrụ nke ADP site na ATP synthase na-enweta "ihe a na-atụgharịghị ma ọ bụ kwụpụ ya site na ịzụta ihe.
Mgbe anyị jiri ọtụtụ awa chọpụta ọgwụ ndị na-efu ọnwụ, anyị nwere ike ịchọpụta 2018 World's Best-Selling Weight Loss Powder Supplements. Mbelata ntụ ntụ ndị a na-atụsi ike na-agụnye orlistat arọ ọnwụ ntụ ntụ ma na-eme ka ọnụ ntụ dị arọ. N'adịghị ka ihe ọhụụ nke ihe mgbapụta dị arọ nke dị na ụlọ ahịa ọgwụ ọ bụla, ọgwụ ndị a dị arọ nke ndị ọkachamara na-ahụ maka nlekọta ahụike ejiriwo ruo ọtụtụ afọ nyocha iji nweta akara nkwado site n'aka FDA na ọtụtụ ndị ọzọ. Anyị na-ekwusi ike na ị na-anwale ọgwụ ndị a n'ihi na egosiri na ha abụghị ọganihu kama ọ dịkwa mma iji ya.
Ọ na-amasị m na e nwere ọgwụ dịgasị iche iche maka ọkụ na mgbaze. Ịmegide insulin na ndị ọrụ na-achịkwa ike dị mma dị mma maka ngbanwe ha. Ana m achọsi ike ma ọ bụrụ na ndị ọrịa kwesịrị ịdabere ma nọgide na ọgwụ ndị a maka ndụ. Ọ ga-amasị m ịhụ nyocha na mmetụta dị ogologo oge.
Ọ dị ka ụda ihe nhụju arọ na-aga n'ihu na-emewanyewanye ma gbanwee oge. M ga-enwe mmetụ ma ọ bụrụ na enwere ihe nchekwa ọ bụla na ịgwakọta ọgwụ ọ bụla a kpọtụrụ aha na iche iche. Daalụ maka ịkekọrịta isiokwu a.
2018 kacha mma ịzụta ihe mgbakwunye ọnwụ ọnwụnwa a nwalere ma tụkwasị obi. Echere m na ndị dị mkpa nke a, kwesịrị ịnwale ha. Eji m n'aka na ọ ga-arụ ọrụ dị ka anwansi.
Enwere otutu ihe nfe nke ndi na-ebu ahia n'ahịa. Iji mee ihe n'eziokwu, enwere m nkwurịta okwu n'ihu ọtụtụ oge, AASraw bara uru iji wuo mmekọrịta, echere m.
Lee, ndepụta a dị nnọọ njọ. Echere m na m maara ugbu a ụdị mmụba mgbu nke m chọrọ. Amaghịdị m na e nwere ụdị dị iche iche dị ka ọrụ / nzube. Daalụ.
Ekwenyeghị m na "anwansi" ahụ n'azụ ihe mgbapụta ọnwụ. Ma nke ahụ gbanwere mgbe m gbalịrị iwepụta akwụkwọ! Echere m na nke ahụ kacha mma na listi a.
Ndewo Kitty, inwere ike izipu ihe gi choro na email efu gi (king@aasraw.com) ma oburu na ichoro ibu ugba. Maka ndenye ọgwụ ma ọ bụ karịa counter, ọ dabere. M ga-eme ike m niile iji nyere gị aka ịme mana ọ ka mma ịrịọ dọkịta gị maka ndụmọdụ ndị ọkachamara.
Ee, ọtụtụ ndị ahịa anyị nwere ụdị ntụ ntụ dị arọ. Ha kwuru na ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ha hụrụ ya n'anya. Banyere nsogbu ahụike, ọ dabere, ọgwụ ọ bụla nwere mmetụta ndị ọzọ. Ọ dị mkpa iji ọgwụgwọ dozie usoro ọgwụ gị.
Enwere otutu ntụ ntụ dị arọ n'ahịa ma ịchọta ihe a pụrụ ịdabere na ya nke na-arụ ọrụ bụ nnukwu ihe ịma aka. Amaara m ndị nyochaworo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe mgbaru ọsọ ọnwụ ọ bụla n'enweghị mgbanwe ọ bụla. Echere m na ị ga-arụ ọrụ kwesịrị ịbụ nhọrọ mbụ maka ụfụ na-abaghị uru tupu ị na-ewere ọgwụ ọgwụ ọ bụla.
Captain U09 / 20 / 2018 na 10: 28 pm
Enwere m ike iburu nke a nanị n'ihi na achọrọ m inwe afọ ntachi. Enwere m ike ịmecha usoro m na ịmalite ịmegharị na Bowel mmegharị nwere ike ime ihe a.
Ebufu ubu ibu abughi nsogbu onye obula choro ka odi nma. Ọ na-adị m ka usoro ndị a agaghị ahapụkwa. Mgbasa mgbasa ozi na-eme ka ozi ahụ dị mma n'oge niile. Ya mere, echere m na m ga-eji ihe ndị a dị arọ ma ọ bụ ọgwụ ndị na-abaghị uru na-eme ka onwe gị ka mma
Clenbuterol na Salbutamol na-arụ ọrụ dị irè n'ịgwọ oke ibu ma rụọ ọrụ ọrụ ahụ. N'ozuzu ya, ntinye dị ka ndị a yiri ka ọ dị irè ma gbanwee na ịmepụta gị ahụike.
Ihe ntanetị09 / 20 / 2018 na 3: 40 pm
Ọ ga-amasị m ịdị mma ka nwanyị ahụ n'elu! Enwere m mmasị na ndị ọkachamara na-ahụ maka mgbatị a bụ ndị nwere ike ịchọta maka ọkwá ya. Ihe nchoputa nke ndi obula buru ibu bu ihe di nma. Daalụ maka ịkekọrịta!
Bianca dị ndụ09 / 20 / 2018 na 5: 56 am
Amaghị m na ihe mgbakwunye ọnwụ ahụ nwere ọkwa dịgasị iche iche. Echere m na ha niile na-ere ọkụ abụba ndị a na-achọghị! Daalụ maka ịkekọrịta!
Kedu, ọnwụ ọnwụ na-alaghachi azụ na 1800s? Enweghị m ihe ọ bụla gbasara ihe mgbakwunye ọ bụla na m na-agbalị ịkwụsị ibu, n'ihi ya, ekele maka isiokwu a na-enye nkọwa!
Daalụ maka ndepụta a! Ihe otutu ihe di iche iche iji choputa otua esi kpochapu ara ara na otua esi ewepu anu aru, wdg.
Ekwadoro m iji ihe ngwongwo ndị a na-abawanye uru ebe ọ na-agafe ọtụtụ afọ nke ule na akwadora ya nke ọma ma rụọ ọrụ. Mbelata ahụ dị arọ nwere ike ịbụ abụba anụ ahụ gị, nri mmiri maka ụkọ ọnwụ, ana m ahọrọ karịa otú a na abụba abụba. Anyị nwere ike ịtụkwasị obi na ọ ga-arụ ọrụ.
Certilistat bụ ezigbo mgbakwunye dị mma nke ndị na-eburu abụba kwesịrị iji. M na-eche na ọ ga-adị ukwuu n'ọdịnihu mgbe abụba anụ ahụ na-adị mfe.
Fanny09 / 19 / 2018 na 10: 47 pm
M ga-akwado Lorsearin maka ndị nwere ọbara mgbali ọ dịkwa mma maka ndị riri oke. Ọ ga - enyere aka kwụsịlata iri nri ma mee ka metabolism dị ngwa.
hụrụ n'anya09 / 19 / 2018 na 10: 37 pm
Olistat ga-adịrị m mma, ọ rere ya n'ahịa dị ka ọgwụ nri niile. Achọrọ m ịnwale ya n'ihi na ọ ga-enye aka itinye abụba ahụ nri na nri. M ga - ahọrọ ịkụzi ọkụkụ.
Orlistat dị ka ụzọ kachasị mma maka ịdalata, enwebeghị m anụ banyere ụdị ọgwụgwọ a ma echere m na ha bara uru ma na-enye aka nye ọtụtụ ndị, tinyere mgbatị na nri oriri edozi.
Onye ọ bụla nwere ike iji ọgwụ ndị ahụ na-efu ọnwụ? Ekwuru m na e nwere nsogbu ahụike ọ bụla m kwesịrị ibu ụzọ tụlee? Echere m na ozi ahụ dị mkpa ebe a, ma ọ bụ ezigbo ọkwa n'ozuzu ya.
Nke a ọ dị ebe nile ugbu a? Edebere ma ọ bụ n'elu nchịkọta? Ọ bụrụ na anyị nwere ụdị nkọwa zuru ezu ebe a. Ka o sina dị, ọ dịkarịa ala, ụdị ọgwụgwọ ahụ niile dị ebe a.
Enweghị m ihe mgbochi na oke ntụ ntụ dị arọ dị ike. Echere m na ị ka chọrọ mmega ahụ mgbe ị na-ewere ihe ndị ahụ. N'agbanyeghị nke ahụ, enwere m mmasị ịgụ magazin ahụ!
Enwere m nnọọ mmasị na ị ga-esi eji ngwa ngwa na-agbaju afọ. Ụfọdụ ngwaahịa ndị m maara na-atụgharị ya ka m wee gụọ akwụkwọ edemede ahụ. Daalụ maka isiokwu na-enye ndụmọdụ! Nke ahụ na-enyere m aka ịma otú e si agba ọsọ ngwa ngwa
Burrows Landen09 / 19 / 2018 na 3: 17 pm
Ebe a na-agwọ ọrịa a na Clenbuterol na-adọrọ mmasị n'otú ha si emetụta ahụ mmadụ. Nke a, ọ bụ ezigbo usoro nsị maka ahụ, clen nwere ike inyere ahụ gị aka ka ọ na-ere ọkụ. Enwere m ike ịhụ ndị ọrịa na-arịọ maka ihe mgbapụta ọnwụ ndị a, nyere na enwere nchọpụta ọmụmụ na-egosi nke ọma na ụlọ ọgwụ.
Moran Torancher09 / 19 / 2018 na 1: 53 pm
Ndị a bụ nchọpụta dị ịrịba ama! Inwe mmetụta dị mma maka mgbali ọbara na ịkwalite nchịkwa glycemic bụ mmetụta bara uru ịchọta na mmeju. arụ ọrụ mgbatị, atụmatụ mgbatị, atụmatụ nri, wdg. Ndị a bụ isiokwu na-ekpo ọkụ na enwere m ya n'anya, echere m na ọ ga-enyere m aka ịmalite atụmatụ atụmatụ ọnwụ m. Daalụ maka ịkekọrịta!
Agaghị m anwale ihe mgbochi ọnwụ, ma anaghị m ahụ onwe m na-anwale ya n'ọdịnihu dị nso. M na-eri nri siri ike, na-etinye calorie na ụkọ caloric ma na-arụ ọrụ siri ike na mgbatị ahụ. Ibu arọ, nweta.
Enwere m ụjọ na m ga-etinye ihe mgbakasị ọnwụ, ma isiokwu a nyere m nkọwa nke otu esi arụ ya, na otú o si dị. E nwere ọtụtụ ọgwụ ndị dị n'ebe ahụ, na ị ghaghị ịkọwapụta nke na-arụ ọrụ maka gị kacha mma. O nwere ike ịbụ na ndị dọkịta na-elekọ anya ga-abụ ezigbo mmalite.
Orlistat rụpụtara m anwansi. Echere m na ọ bụghị nanị ọgwụ ọjọọ ka ọnwụ dị arọ. Anyị kwesịrị ikpokọta ya na arụ ọrụ anụ ahụ na nri ahụike / edozi ahụ iji hụ na anyị ga-ahụ ihe ndị anyị chọrọ.
Lee, ọgwụ ndị a nile dị oke egwu. Na-agbalị ịkwụsị arọ maka afọ 2 ugbu a, ma ruo ugbu a, enweghi m anya ịhụ ihe. Ma eleghị anya, ọ bụ oge m na-anwa ịnweta ihe mgbapụta dị arọ.
Enyi enyi, enweghi nchegbu. Ọ bụla ọgwụ nwere mmetụta dị ka anyị maara. Ma ya na-adabere. Ị ga-enweta uru ndị ọzọ site n'ibelata ntụ ntụ ma ọ bụrụ na ị na-ewere ha n'ụzọ ziri ezi ma ọ ga-aka mma na egwuregwu. Ụfọdụ ndị ahịa nyere iwu ka anyị nwee ntụpọ na-esi ísì ụtọ na ọkwá na-esi na anyị, ha kwuru na ọ bụ ọrụ nke ọma na ha hụrụ ya n'anya nke ukwuu.
Daalụ maka nyocha gị. Ọ bụla ọgwụ nwere mmetụta ndị ọzọ. Ọ dabere. Ma m na-eche na mkpọchi na-eme ka ntụ ntụ ma ọ bụ na-atụgharị ntụziaka ga-abụ ezi echiche maka gị dị ka ahụmahụ nke ndị ahịa anyị. Karịsịa maka okwu ọnụ, BBC kọrọ ya n'oge na-adịbeghị anya, ọ na-enwekwa mmetụta dị nta.https://www.bbc.com/news/health-45319393
onwa09 / 19 / 2018 na 3: 21 am
Echeghị m na a ga-enwe ihe ọ bụla na-emerụ ahụ banyere iwere mgbakwunye mgbakwunye arọ a ebe ọ bụ na FDA na Japan kwadoro ya. Should ga-eji mgbakwunye ndị a mee ihe maka oke ibu, n'ihi na ha na-efufu abụba ngwa ngwa. Gbakwunyere n'ibelata oke nri, ị ga - ebunye gị abụba ngwa ngwa.
Nke a09 / 19 / 2018 na 3: 11 am
Ọ dị mma ka ị gosipụta ihe mgbakwunye kachasị dị arọ. M na - agụ ajụjụ dịka nke a na - enweghị ntụpọ ntụpọ na azịza ezi uche dị na - enyeghị m olileanya na ndị chọrọ eziokwu a n'ezie iji hụ ya.
Ọ na-atọ m ụtọ iri ihe na ịṅụ ihe ọṅụṅụ, ya mere ọ na-echegbu onwe m mgbe niile maka ịdị arọ. Ọ bụrụ na mgbakwunye a nwere ike ilekọta ahụ m n'ebughị ụzọ rie nri, mgbe ahụ ọ dị oke mma na m nwere ike ịchọta isiokwu a. Daalụ!
Agaghị m anwale ihe mgbochi ọnwụ, ma anaghị m ahụ onwe m na-anwale ya n'ọdịnihu dị nso. M na-eri nri siri ike, na-etinye calorie na ụkọ caloric ma na-arụ ọrụ siri ike na mgbatị ahụ. Ibu arọ, nweta. Ma ụfọdụ ndị obese m hụrụ, ọ na-esiri ha ike ịla n'iyi, n'ihi na naanị ịdabere na ahụike na ịchịkwa ihe oriri nke calorie apụghị iru ibu ha chọrọ. Ma eleghị anya, mbadamba ihe mgbu dị arọ nwere ike inyere ha aka.
Okpokoro ihe ndina nile kwesịrị iji ọgwụ ọjọọ a kpọrọ ihe ma hụ otú ha nwere ike isi kwụsị ibu arọ n'enweghị nsogbu dị ukwuu maka ndị ahụ na-emega ahụ. Mee atụmatụ maka ụmụ nwoke nri, gwa ha ka ha rie ihe oriri siri ike, rie nri ahụike. Ibu oke site na iri nri abughi uzo di oke obara
Aghaghị m ibu ụzọ jụọ dọkịta m ma nke a adịghị mma. Nke a ọ dị ugbu a? Iji mee ihe n'eziokwu, amatala m ntakịrị ihe gbasara sibutramine na orlistat ntụ ntụ site na enyi m. Echere m na m kwesịrị ịmụtakwu ma mewe ihe.
Enwere m obi ụtọ na ị nwere ike ijide n'aka na mgbakwunye ndị a dị mma ma dị irè iji. Mgbochi nke agụụ dị ka Sibutramine ntụ ntụ na Lorcaserin ntụ ntụ yiri ihe kasị baa uru n'otú ha si emeso uche na ahụ. Enwere m ike ịhụ ọgwụ ndị a na-enwe mmetụta na-emebi ihe na ụdị ndụ ndị mmadụ na nyocha nile iji mee ka ha dị mma.
Ọ dị mma ndị a niile e gosipụtara na-egosi na ịlafu arọ. Ọ dị ịtụnanya otú ụfọdụ n'ime ha si arụ ọrụ dị ka Orlistat na Synephrine na mgbaze na abụba ọkụ. Daalụ maka ịkekọrịta!
ọ dị mma, ma ọ nwere mmetụta dị iche iche na-echegbu onwe ya maka ibu kama ọ na-echegbu onwe ya gbasara tummy nwere ike belata akụkụ ahụ niile dị mma, dị ka sibutramine, Achọrọ m ịnwale ụfọdụ ma echekwara m banyere mmetụta ndị ahụ. Nyere m aka?
Nke a nwere ike ịzọpụta ndụ, m ga-eme ka ndị ezinụlọ m na ndị enyi mara nke a. Ekwuru m na ọ dị anyị mkpa ijide n'aka na ihe ọ bụla anyị na-etinye na ntụ ntụ dị arọ agaghị eme ka ọ bụrụ nsogbu anyị.
Enwere m ọtụtụ ihe mgbakwunye ma ọ dịghị ihe ọ bụla rụpụtara m. Ụfọdụ n'ime ha kpatara nsogbu dị egwu. Ọ dị mma na isiokwu a na-egosi ozi zuru oke banyere mgbakwụnye a. Enwere m olileanya na m nwere ike ịnwale ụfọdụ ntụpọ ntụ ntụ ma zere ụfọdụ mmetụta dị egwu. Ọ bụla ndụmọdụ?
Ọ dị na mbadamba nkume site na listi ọkpụkpọ. Enweghị ike iri ihe oriri ọ bụla, abụba ma ọ bụ KFC! Enwere m afọ ojuju na ... ị mara. Hahaha
Orlistat ntụ ntụ nwere mmetụta dị mma na ọnwụ dị arọ na amaara m onye nọ na ya.
Achọrọ m ịnwale ebe nkwanye ọkụ nke Lorcaserin HCL n'ihi na ọ dị mma maka metabolism ma nwee ike igbochi mkpali maka nri. Ịhapụ nri anaghị abụ nsogbu kachasị mma.
udo09 / 18 / 2018 na 8: 39 am
Nke a bụ n'ezie maka m ebe ọ bụ na m ga-anwale ịla n'iyi ogologo oge ugbu a. Nke a post ga-abụ oge kwesịrị ekwesị ịhọrọ ihe kachasị mma maka abụba na-ere ọkụ. Mgbe ahụ, m ga-eche banyere mmụba dị arọ maka ntụsara ahụ maka m ma zụta ha n'ọdịnihu dị nso. Nke a bụ n'ezie akwụkwọ dị egwu.
ụgbọ ala09 / 18 / 2018 na 5: 17 am
Enwerela m ihe mgbochi tupu mbelata ibu. Otú ọ dị, echere m na o nwere mmetụta dị njọ n'ahụ m ka m wee kwụsị iburu ya. M ka na-ala azụ banyere mgbakwụ na-adị arọ ntụsara ahụ.
Anwalewo m ọtụtụ mgbakwunye mgbakwunye nri tupu mana ọ dị nwute na ha anaghị arụ ọrụ ọfụma. Daalụ maka edemede a na-enye ezigbo nkọwa. Dịka ugbu a, ana m ahụ ahụ m etu ọ dị.
Enwere m anya nke ukwuu na enwere nnukwu ihe nfe na-agbanye ọkụ ọkụ na ahịa. Na-eche echiche na ị ga-ewere otu otu ụbọchị iji kwado nhọrọ ndụ m ugbu a. Otú ọ dị, ọ dị m ka m chọrọ ndenye aha pụrụ iche ka m wee zụta otu n'ime ụlọ ahịa ahụ? Ka enwere ọgwụ ndị m nwere ike inweta n'enweghị mkpa ọ bụla maka ndenye aha?
Priteh Vishwakarma09 / 18 / 2018 na 12: 47 am
Mbelata ntụ ntụ nwere ike ọ gaghị adị mma maka onye ọ bụla. Ndị mmadụ na-ahụ maka nri ụfọdụ n'ime ihe ọkụkụ dị arọ kwesịrị ịchọ maka ihe mgbakwunye anụ ahụ.
bran09 / 17 / 2018 na 11: 40 pm
Akwukwo edeputara nke kachasi ihe kacha mma nke kachasi ihe kacha mma. M na-achọ ihe mgbakwunye n'ihi na ọ dị irè mgbe niile ma ọ bụrụ na ejiri ụbụrụ na-achịkwa ihe omume ọma .Just na-ede akwụkwọ a maka amaokwu n'ọdịnihu.
Nke a bụ nnukwu post maka m, m na-aga njem njem dị arọ ma na m na-agba m arọ site na ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Ga-enyocha Sibutramine HCL (Meridia) CAS.it yiri ka ọ ga-abụ ihe M
E nwere ọtụtụ ọgwụ ndị na-enyere aka n'ịdị arọ. Ndị ọgwụ ndị a dị irè.
Meds + na-arụ ọrụ kwesịrị ekwesị nri bụ ngwá agha m na-efu ọnwụ. Ọ bụ ezie na m kwụsịrị ya ugbu a iji nọgide na abụba abụba. Ikekwe, mgbe m ga-alaghachi n'usoro m, m ga-eji ndị a.
Kedu ka onye ọ bụla si ekwu banyere ọgwụ? M mgbe niile n'akụkụ anụ ahụ ma ọ bụ akụkụ oriri na-edozi egwu na okwu nke isiokwu a ma nke a bụ oge mbụ na ọkụ dị na tebụl. Ihe mgbakwunye ma ọ bụ ma. 2
Ana m agbalị ịda mbà n'ihi ya enwere m nnọọ obi ụtọ na m hụrụ akụkọ a nke na-enye ihe ọmụma dị otú ahụ banyere ịhọrọ ihe mgbakwunye ọnwụ kwesịrị ekwesị. Nke a na-enye m ụfọdụ ihe mgbochi ọ bụla nke m nwere ike imere m nhọrọ kachasị mma. Daalụ!
7 Best Nootropics (Smart Drugs) na ahịa nke 2018	7 Best Nootropics (Smart Drugs) n'ahịa nke Armodafinil